Home Somali News Somaliland: Dugsiyadda Hoose/Dhexe Ee Hargeysa Oo Ardayda Ku Soo Rogay Lacagtii Laga...
Macalimiinta dugsiyadda hoose dhexe ee dawliga ah ee caasimadda Hargeysa ayaa soo celiyay lacagtii ardayda laga qaadi jiray, taasi oo burinaysa siyaasadii xukuumadda Somaliland bilaash kaga dhigtay waxbarashadda dugsiyadda Hoose/dhexe.
Waalidiin kala duwan oo degan caasimadda Hargeysa, ayaa ayaa cabasho ka muujiyay arrintani, waxaanay sheegeen in lacagtii (Fee)-ga ahayd ee laga qaadi jiray ardayda dugsiyadda hoose iyo dhexe la soo celiyay. Tallaabadaasi oo lidi ku ah himiladdii ay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo bilaashka kaga dhigtay waxbarashadda dugsiyadda hoose/dhexe ee dalka.
“Waxaa carruurta lagu soo roggay muddooyin kan dambe oo dugsiyaddu sharci ka dhigteen-ba inay bil walba ardayda soo faraan in la bixiyo 15000 oo shilin. Arrintaasi waxaanu jeclaan lahayn haddii xukuumaddu ay soo celisay lacagtii ardayda laga qaadi jiray in si rasmi ah masuuliyiinta waxbarashaddu daboolka uga qaadaan, haddii kale ay dib isugu noqdaan oo lacagtan la gurayo la joojiyo”Ayuu yidhi Axmed Ismaaciil Xandulle oo ka mid ah odayaasha ku dhaqan caasimadda Hargeysa, oo noo sheegay in afar caruur ah oo uu dhalay ay wax ka bartaan dugsiyadda hoose dhexe, isla markaana mid walba laga qaado lacag 15 kun oo shilin ah bil walba.
Weriyeyaal ka tirsan wargeyska DAWAN, oo maalmihii la soo dhaafay u kuur-galay arrintan ayaa soo xaqiijiyay in maamuleyaasha dugsiyadda Hoose/dhexe ee caasimaddu ay mudooyinkan dambe ardayda ku soo rogeen lacag aan la cadaynin sharciyan waxa ay ku salaysan tahay, oo aanay macnaynin Wasaaradda waxbarashadda iyo tacliinta sare ee Somaliland.
Waxa kale oo la xaqiijiyay in ardayda aan bixin lacagtan sharci darrada ah laga eryo dugsiyadda waxbarashadda, taasina oo ah fadeexad labaad oo ay wasaaradda waxbarashaddu tahay inay xal u hesho. Macalimiinta iyo maamuleyaasha dugsiyadda Hoose dhexe ee caasimaddu ayaa la sheegay in ay ku cawdaan in mushaharka ay ka qaataan dawladdu uu aad ugu yar yahay, isla markaana aanu daboolaynin baahidda qoysaskooda oo mushaharkoodu aanu waxba u goynaynin.
Waxaanay ku doodayaan macalimiinta dugsiyadda dawladu in lacagtii ay ardayda ka qaadi jireen ee laga jaray ay saamayn weyn oo taban ku yeelatay noloshoodii. Dhinaca kale, Wasiirka Waxbarashadda iyo Tacliinta sare Prof. Faarax Cilmi Maxamuud (Geedoolle) oo aanu xalay dhawr jeer isku daynay in aanu wax ka weydiino lacagtan ardayda dugsiyadda hoose/dhexe lagu soo rogay ayaanay noo suurto-gelin, kadib markii uu naga qaban waayay Telefoonkiisa gacanta.
Sidoo kale, Wasiir Ku xigeenka wasaaradda Waxbarashadda iyo Tacliinta sare Cabdirashiid Ismaaciil Kaahin, oo aanu isna isla xalay la xidhiidhnay ayaa ka gaabsaday inuu arrintaasi ka hadlo. Waxaanu ku tiraabay
“Adeer Anigu Arrintaas Kama Hadlayo.” Markii aanu weydiinay sababta uga hadlayaynin cabashadan waalidiinta waxa uu yidhi “Adeer, Ninka ila Hadlayaa sow DAWAN ma aha? Wargeyskii dawladda sow ma aha. Adeer arrintaas ka hadli mayo, ee waxaad qorayso qor.” Ka dibna waxa uu nagu jaray Telefoonkii.
Si kastaba ha ahaatee xukuumadda talladda haysa ee uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), waxa ka mid ah qoddobada ay kalsoonida kaga kasbatay bulshadda waxbarashadda dugsiyadda Hoose/Dhexe ee dawliga ah oo laga dhigay lacag la’aanta. Waxase muuqda in himiladdii madaxweynaha ay mijo xaabinayso siyaasad xumo ka dhalatay maamulka wasaaradda waxbarashadda oo ay ahayd inay iyagu dabo-galaan in qorshahaasi sidii la rabay u hirgalay iyo in kale.
Dugsiyadda Hoose/Dhexe ee Hargeisa
Qiiso Murugo Leh: Nin Aroos Ah Oo Xaaskiisi Ku Geeriyootay Duufanti Ku Dhifatay Somaliland + Warbaahinta Oo U La Hadli Kari Waayey
Somalia: Ra’iisal wasaare Kheyre oo sheegay in uusan jirin khilaaf u dhaxeeya xukuumadda iyo baarlamaanka